Izihlangu ezikhathalela indalo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Kancinci kancinci, ngakumbi nangakumbi kunye neempawu kunye namashishini awenzayo iimveliso zezinto eziphilayo.
Uphawu lwesiFrentshi FYE (Kwi-Eart yakho) Oko kuthetha ngeSpanish "kumhlaba wakho" usungule izihlangu zendalo kunye nezihlangu.
Olu hlobo lusebenzisa kuphela izinto zendalo kunye neemveliso xa lusenziwa ukongeza ekubeni lubolile.
Phakathi kwezinto, izixhobo ze isetyenzisiwe njenge PET ukuba ufumana kwiibhotile zeplastiki, ikotoni yendalo for imitya kunye nelings. Ukunika izihlangu umbala wazo basebenzisa ii-pigment kunye Ukuthanjiswa kwendalo ngaphandle kokungcolisa okanye iimveliso ezinetyhefu esekwe emanzini kunjalo ke inokuphawuleka.
I-FYE ikwenzile izihlangu ezikumgangatho ophezulu kunye neemodeli zeembadada ezinefuthe lokusingqongileyo.
Olunye uphawu lusebenzisa urhwebo oluzinzileyo kwaye luyalihlawulela Ukukhutshwa kwe CO2 ukusebenzisana neprojekthi ye amahlathi eIndonesia phakathi kwezinye izinto ezisingqongileyo nezentlalo.
I-FYE ngumzekelo wenkampani ejongene noluntu kunye nokuzibophelela kwendalo, ngakumbi kwicandelo elifana nezihlangu. Kuba zikhona iinkampani ezinkulu ezivelisa izihlangu zemidlalo kunye nezinye iintlobo zezihlangu ezithi zenze izinto ezinoxanduva kwaye zivelise okuhle mpe mbelelo kodwa bayabaxhaphaza abasebenzi.
Kubaluleke kakhulu ukuba iinkampani zixhalabe ngokuvelisa iimveliso ezingonakalisi okusingqongileyo kwaye zikwasebenzisana ekuphuculeni umgangatho wobomi bendalo esingqongileyo.
Njengabathengi kufuneka siluxhase olu hlobo lwemveliso ukubonisa ukuba nathi sinomdla khusela indaloUkuthenga iimveliso eziphilayo.
Ukuzibophelela kwindalo esingqongileyo kufanele ukuba yeyomntu wonke kwaye indlela elula yokunceda kukutshintsha iindlela zokusebenzisa abanye abantu ezinokuhlala ngokwasentlalweni nakwimo engqongileyo.
Ukuba sinako ukufikelela kuyo, kufanelekile ukuba sikhethe iimveliso zendalo, ezirisayikilishwe, ezinokuboliswa ziintsholongwane ezinyamekela imeko-bume.
Kuyenzeka ukuba uhambe ngesihlangu sendalo kwaye ngale ndlela inyathelo lakho kwiplanethi lincinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Izihlangu ezikhathalele okusingqongileyo
Isikhumbuzo esiluhlaza ukukhumbula amaxhoba e-9/11 eNew York